A Must Read - A Letter Yezvichemo From Small House. A Must Read - A Letter Yezvichemo From Small House.
A Must Read - A Letter Yezvichemo From Small House.
Dear Daddy, Honie Wangu.
Mudiwa ndati ndinyore tsamba iyi kuti ndinyatso ita clarify mamiriro ezvinhu.
1. Ini ndiri wako as long as uchindi chengeta kwete kundichengera. Kuchengeta nekuchengera zvaka tosiyana. Chengerai pamuri kuchengeta daddy.
2. Kundi introducer kushamwari dzenyu hakusi kuchengeta. Kufamba ndiri mumota yenyu hakusi kuchengeta nekuti wandi saver 5rand chete ye kombi. Kundimwisa doro hakusi kuchengeta nekuti I can do without doro. Ndinenge ndichitoitirawo imi kuti muwane muvaraidzi.
3. Nyaya yekuuya kumba kwangu kuzotandara mondi kwira haina kushata ba nekuti iniwo zvekukwirwa ndozvida chaizvo. Asi chichengetai iniwo zvese nenhengo yamunokuza kuti rinonaka. Munoitawo muchindipawo mari ye rent kana kuita chip in ne half ye rent zvayo. Mukasandipa munofunga kuti inobvepi? Kundi saidziraka kuti nditsvage umwe uku?
4. Ndapota hangu musauya kuzondiudza ma problems enyu na maiguru nekuti kakawanda kacho munenge muchinyepa. Plus ini handisi marriage counsellor ini. Itai zvamafambira zvekundipa ma lovingtons nekundikwira.Zvimwe izvi zvinotondi svota.
5. Imi mune mukadzi ini handina murume tese tozviziva kuti amaiguru hamusi kufa makavasiya kuti mundiroore . Chamuri kuda kubva kwandiri kuwana munhu wekukwira sezvo amaiguru vachiti bonde once pamwedzi or vakaneta. Huyai muzondikwira makasununguka henyu everyday nekuti for you ndine zemo risingaperi uye handineti. Huyai nhengo ndeyenyu asi ini manje ndoda kukupai zvamunoda imi muchindipawo zvandoda. Ini zvandoda zviri simple. Ndoda kuchengetwa. Pafungei daddy kuti makapedzisira kundipawo mari rini kana maka mbondipa yekungoti mudiwa tora $5 iyi utenge zvaunoda.
6. Musafarira kundibvisa mabhurugwa amusingazive kuti akabvepi uye akatengwa nani. Nditengerei imi type yemabhurugwa amunoda kuti ndikupfekerei kana kundipa mari ndoenda ini kundotenga mabhurugwa amunofarira.
7. Musoro ndinougadzira kuti musanyare kufambaka neni zvino mukasandipa mari yekuugadzirisa panozoita problem.
8. Hembe dzandinopfeka ndedzekuku impressai daddy saka do your part, itaiwo muchi nditengera hembe.
9. Ndandati ndingokubudirai pachena musazovhunduka ndoti musasvika kumba kana kukurambidzai kukwira, bhurugwa randinenge ndakapfeka hamusimi makatenga.
10. Saka list yangu yezvamunofanirwa kukavhawo ku small yenyu yakamira yakadai:
1. Sex everyday huyai mundipe kana muchikwanisa
2. Rent yekumba musi wa 30 inenge yodiwa i $300 munokwanisa kundipa half imwe ndotsvaga ndegawo.
3. Ndoda kutengerwa mabhurugwa 7 nemi ekubva monday to sunday pamuri kuuya kuzondikumura hembe. Pombonokai kuatenga anytime even more than 7 andataura.
4. Every month ndoda mari yekugadzirwa musoro $50.
5. Ndoda zvakare mari yekutenga hembe once in 2 months inova $150.
6. Neniwo ndodawo kutengerwa ma grocery, kwete kundikwidza mota yenyu ichitadza kufema nema grocery amaiguru. Tese tine mapeche tese todawo ma grocery.
7. Kobva kwaita $50 ye maintanance ne $80 yesecurity kuitira kuti ndikabatwa na amaiguru vakandirova handimhangare kupolice or kuvadzosera nekuti kana tasvika pazvibhakera zvevakadzi ndinokindiza munhu akafa.
Saka mari iyi inobhadharwa every month.
Kana mune chichemo ivai free kutaura kana musingazvikwanise sunungukai kutsaga umwe nekuti hatina mubatanidzwa uno benefita munhu one chete.
Wenyu wepamoyo ne bonde Small House..!